1. Inona ity? Tsy natao ho avy mihitsy Ho avy ela vao sitrana Angamba ho amin'ny fahasosorana, fahasosorana, tsy mahavita na inona na inona. Olona maro no mety niaina ilay olana tamin'ny fitsikilovana. Indraindray tonga amin'ny fotoana tsy tokony hitoviana izany Eo am-pivoriana Na miresaka adihevitra lehibe Na amin'ny hetsika iray izay hahaterahan'i Kaiwa Raha mieritreritra an'izany dia mahasosotra, mamihina mafy ny fonao. Aza matahotra anefa Androany dia nanjary fantatsika ny fomba fanesorana hiccups. Niangona izahay hilaza aminao mba hisorohana ny fanahiana Rehefa miverina io soritr'aretina io
2. Fantaro ny antony mahatonga ny fitsikilovana alohan'ny hahafantaranao ny fomba hialana amin'ny fisolokiana anao. Tsy maintsy misy antony. Na iza na iza manao izay mety ho afaka hikarakara sy hisorohana an'io soritr'aretina manelingelina io? Ny hiccup dia vokatry ny fihenan'ny fihenan'ny tampoka ny hozatry ny diaphragm eo anelanelan'ny lava-tratra sy ny kibony. Noho ny fitohanana Vokatry ny fifohana sigara haingana Fa amin'ny fotoana iray ihany, ny rivotra miditra dia voafandrik'ireo tadim-peo izay nakatona tampoka. Avy amin'ny fihenan'ny hozatra laryngealy Miteraka feo mikotroka izay mahasosotra antsika Mety hitranga mandritra ny fotoana fohy izy io ary avy eo hanjavona, na amin'ny toe-javatra sasany maharitra 48 ora mahery .. Mety ho avy amin'ny fifohana sigara be loatra ny niavian'izany. Misotro mahery Mihinana sakafo haingana, aza mitsako azy tsara na mihinana mofomamy. Mety koa ny fientanam-po na ny fiovan'ny toetr'andro tampoka ka mahatonga ny vatana hanitsy tampoka.
3. Fomba 5 hanalana ny hiccups Ary tsy misy fiatraikany amin'ny vatana Ho an'izay miketriketrika matetika Androany dia mahita fomba azo antoka sy mora isika. Ny tena zava-dehibe dia tsy misy fiatraikany amin'ny vatana ny miala eo.
4. Makà rano mangatsiaka be na hisotro rano mangatsiaka be. Io dia hahafahanao miaina bebe kokoa amin'ny fisotroana rano mangatsiaka iray kaopy, ary ny rano dia hanampy ireo hozatra manakana ny fisefonao hisokatra sy hiala sasatra, fa misotroa miadana kosa mitazona ny fofonainao aorian'ny fialan-tsasatrao. Alina amin'ny alina mba tsy ho voakenda.
5. Tazomy ny fofonainao mandritra ny fotoana fohy amin'ny fanisana am-polony hatramin'ny folo. Mitovy amin'ny fomba voalohany izy io. Rehefa avy tazominao Afaka miaina bebe kokoa isika. Afaka manampy amin'ny fanalefahana ny soritr'aretin'ny alina.
6. Mihinana sakafo marikivy sy mamy bebe kokoa toa ny silaka voasarimakirana na cubes siramamy. Ity dia fomba iray hafa hanampiana ny sainao hiambina hatrany. Avy amin'ny tsiron'ny sakafo Tsy miteraka fahavoazana
7. Manasà namana iray hanaitra ny hatairana Rehefa mitranga ny manafintohina, maka aina haingana ny vatana. Ary ny hozatra dia mipaka hatrany amin'ilay manaitra haingana
8. Ny fofona na miteraka soritr'aretin'ny sneeze Io dia ahafahantsika maka rivotra sy rivotra miaina manampy ny diaphragm sy ny hozatry ny rivotra mba hampiharana azy.
9. Raha mbola tsy very ireo dingana voalaza etsy ambony Ary mitohy ny fihirahana mandritra ny 48 ora mahery, tsy maintsy manatona dokotera mitady fanafody sy fitsaboana hahitana ny antony Araka ny nolazaiko, ny famantarana rehetra dia misy fiaviany. Ary ny fitsangatsanganana lava loatra, toy ny vatana, dia mandefa fambara fampitandremana izay tokony ho azontsika antoka fa hanamarina sao azo antoka isika.